“Tsy maintsy hajaina ny endrika jeopolitika, saingy tsy tokony ho rendrika ao anatiny isika” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Febroary 2019 5:55 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Italiano, 日本語, Français
Juan de Dalmau, filohan'ny International Space University (ISU). Sary nahazoana alàlana.
Ity no andiany faharoa amin'ny antsafa niarahan'ny Globala Voices tamin'i Juan de Dalmau, filohan'ny anjerimanontolo iraisampirenena momba ny habakabaka (ISU amin'ny teny anglisy). Ato ny andiany voalohany.
Ahoana no nataonareo nahatratrarana ny taham-behivavy 40% , nefa maro be ireo firenena efa lasa lavitra ara-indostria fa sahirana mandresy lahatra ny tovovavy mba hitozo amin'ny fianarana siantifika?
JdD : Vaovao koa izy io ho anay, saingy io no vokatry ny taona marobe nanaovana ezaka sy niarahana nifanome tànana. Fifanarahana an-taona maro miaraka amin'ny Agence spatiale européenne (ESA) – Masoivoho Eoropeana momba ny Habakabaka – ny iray amin'izy ireo, izay vao avy nohavaozina indray mandritra ny telo taona ho avy. Manome tohana ara-bola izy ahafahana manome vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra mendrika indrindra natolotry ny ESA, miaraka amin'ny ezaka fampitomboana ny isan'ny vehivavy.
Raha ny avy amiko manokana, dia ireo taona marobe nifampizaràna torohay sy nifanabeazana tao amin'ny ESA. Ny tsy ampy dia ireo lasitra ho alaina tàhaka. Araka izany dia miaraka miasa amin'ireo mpanamboatra saribakoly irlandey ‘Lottie’ izahay mba hampivoarana fitambaranà / tahirinà saribakoly « maneho vehivavy mpiasa». Misy araka izany ny Lottie mpanamory sambondanitra, izay iarahan'ny Lottie sy ny ESA.ny famarotana azy
Etsy andaniny, ankizivavy telo mpianatra ao anatin'ilay andiany amin'ity taona ity no nanapaka hevitra hanao fandalinana momba ny politikan'ny zaramira ao amin'ny ISU, izany hoe eo amin'ny mpianatra, ireo mpampianatra sy ireo mpitondra ny fandraisany anjara avy any ivelany. Eo an-dàlana amin'ny fandrafetana taridàlana izy ireo ankehitriny mba hanatsaràna ny zaramira, indrindra fa ho an'ireo mpitondra fandraisana anjara avy any ivelany, ary tena dodona aho ny hahafantatra izay fehinkevitr'izy ireo.
Mifàka ao anatin'ny fampiroboroboana ny teknolojia mitodika amin'ny fandriampahalemana ny iraka tontosainareo; ahoana ny fomba amakivakianareo ireo fihenjanana ara-jeopolitika misy amin'izao fotoana izao?
JdD : Rehefa sendra lohahevitra sarotra nefa mila vahàna aho, averiko vakiana ilay velirano nataon'ireo mpanorina ny ISU : [Ny ISU dia toerana iray andraisana an-tanandroa ireo sampam-pianarana sy mpianatra ary mpampianatra avy amin'ny fiaviana rehetra, toerana iray handrisihana sy hanajàna ny fahamaroana ara-kolontsina, filôzofia, fiangaly fiaina sy fomba fijery isankarazany] Hitanao fa tsy ao akory ny teny hoe habaka na teknolojia. Filôzôfia io.
Manana mpiara-mifanome tànana izahay any Etazonia, Shina, Afrika Atsimo ary Japàna… Indraindray, toy ny fampianarana rehefa vanim-potoana fahavaratra any Shenzhen, miteraka olana ho an'ireo sasantsasany mpitondra ny fandraisana anjara avy any ivelany izany. Araka izany, raha tsy hoe noho ny fiovàna politika ao Etazonia, tsy ho afaka ny hankany Shina ireo mpiasan'ny NASA.
Nisy lesona iray azoko tamin'ny 1989 fony aho mpianatra tao amin'ny ISU: Tsy maintsy hajaina ny endrika jeopolitika, saingy tsy tokony ho rendrika ao anatiny isika. Tsy mino hoe misy zavatra tsy afaka atao fa, rehefa miaraka aminà fahaiza-mandinika kely fotsiny, dia efa ao izay.
Nisaintsaina tetikasa iray hametrahana toby mihantona mihodidina ny tany ny tarika tato aminay, izay ho fototra iaingàn'ny fikarohana momba ny vokatra ara-fizika sy biôlojika ateraky ny hery maninton'ny Tany mba hanomanana ny dia ho eny amin'ny Volana sy ny planeta Mars izay ny hery manitona eny amin'izy ireo dia kely lavitra in'enina avo heny miiba raha mitaha amin'ny an'ny Tany. Nisaintsaina toby iraisampirenena iray alefa avy any amin'ny firenena tsirairay izahay, Etazonia, URSS taloha, sns.., ary rehefa eny amin'ny habakabaka vao atambatra. Nilaza ilay ramatoa profesoranay hoe « tena tsara be izany, saingy mbola mandresy hatrany ny politika ». Taona vitsivitsy taty aoriana, nanasà an-dry zareo Rosiana ny filoha Clinton mba handray anjara amin'ny fananganana ny Toby Iraisampirenena eny an'Habakabaka…
Hatramin'ny nidiran'ireo orinasa tsy mainkina, toy ny SpaceX sy ny maro hafa, tsy resaka raharaham-panjakana madiorano irery intsony ny fakàna ny habakabaka : aiza ho aiza ny toeran'ny ISU manoloana ny firoboroboan'ny orinasa tsy miankina momba ny resaka habakabaka tsy takamaso ?
JdD : Andramanay ny mampiseho fa mivoatra ny fomba fijery ny atao hoe habakabaka. Ampitahainay ny fomba nampiasàn'ny olombelona ny ranomasimbe. Toy ny ranomasimbe ihany, toerana iray ny habakabaka, ary tsy fahefam-panjakana na ny tsy miankina irery fotsiny. Raha asehontsika fa tomponandraikitra isika, afaka mahavita zavatra betsaka eny an'habakabaka: manao fikarohana mitrandraka ireo loharanon-karena tsy hita fetra eny, ary raha azo atao dia amin'ny fomba maharitra (Ao anatin'ny roa minitra monja, maharay angovo tsy lany laniana avy amin'ny masoandro ny Tany, izay afaka miantoka ny filàn'izao tontolo izao mandritra ny taona iray !). Fa azon'ny habakabaka atao ihany koa ny manome sehatra iray ivelany mba hahafahana mandinika ny Tany sy ho lasa toerana fisindàna toy ny fanaovana fizahantany amin'ny sandany mirary.
Antenainay mba tsy ho lasa toerana hifanandrinana ny habakabaka. Tsy sehatra ifotoran'ny ISU ny resaka fiarovana, na dia manasa mpandray fitenenana momba izany lohahevitra izany aza izahay.
Amin'izao fotoana izahay dia manolotra fehezam-pampianarana maharitra herinandro roa, nomenay lohateny hoe New Space [Entrepreneunariat spatial]. Hitanay mipoitra ireo orinasa vaovao marobe maniry ny hanao fandraharahana eny amin'ny habakabaka, mazàna dia ireo mpianatra fahiny tato amin'ny ISU no manetsiketsika azy ireny.
Moa ve ny ISU miasa mba hamadika ireo nofinofy mihevitra zavatra tsara ho lasa tena zavamisy? Ahoana no fijerinareo ny hoavy: mponina maharitra eny amin'ny Volana, olona mpitrandraka eny amin'ny Mars, sa fitrandrahana amin'ny fomba tsara indrindra ny loharanonkarena misy ety an-Tany…?
JdD : Tena tiako izay fomba fiteny hoe « nofinofy mihevitra zavatra tsara» izay, tena izay mihitsy. Mampanonofy ny habakabaka. Rehefa anontanianao ireo mpanatrika raha toa mahafantatra olona iray liana be tamin'ny resaka habakabaka fony izy mbola ankizy, 90% no manangana ny tànany. Mampanonofy ny ankizy ny habakabaka, toy izany koa ny olombelona rehetra.
Ny hoavy ve ? Misy olona manonofy ny honina maharitra eny amin'ny Volana sy Mars. Ny mahaliana dia, amin'ny ankapobeny, katsahan-dry zareo ny hamerina manorina eny izay misy ety ambonin'ny Tany…
Tsy maintsy kolokoloina ny nofinofy ! Tsy olona an-jatony monja fa an-tapitrisany no eritreretin'ireo orinasa toy ny SpaceX na BlueOrigin apetraka hiaina eny amin'ny Volana. Mba hampanjary an'izany, tsy maintsy misy vola atsofoka ao, mamorona sambondanitra, sns… Tsy mitsahatra ny mandray olona ireny orinasa ireny.
Afaka manampy antsika hitahiry izay efa ananantsika eto ambonin'ny tany ihany koa ny habakabaka, misintona izay tombony tsara indrindra avy amin'izany. Mifanjohy ireo endrika roa ireo: afaka manampy antsika mba hikarakara tsara ny Tany ny habakabaka. Taona maro lasa izay, nanomboka hetsika iray ny Firenena Mikambana, izay ny tanjona dia ny hijerena izay fomba azon'ny habakabaka hanampiana ho fanatratrarana ireo tanjona 17 napetrany ho an'ny fampandrosoana lovainjafy (amin'ny lafiny fanabeazana, fahasalamana, sakafo, fitsirihana mialoha ireo loza voajanahary…sns…). Mipetraka eny amin'ny Volana mba ho afaka mikolokolo ny Tany, fomba fijery iray tsy mbola nisy tany amin'ny 10-15 taona lasa izany.
Andrew Kowalczuk, mpandika ho an'ny Global Voices, no nikarakara ny fampifandraisana ny Global Voices tamin'ny International Space University ISU. Suzanne Lehn kosa nanamora izay fihaonana izay.